कहाँबाट पाइन्छ सस्तो ब्याजमा ऋण ? - सहकारी खबर
कहाँबाट पाइन्छ सस्तो ब्याजमा ऋण ?
Share : 149
अहिले आफ्नो कमाइले मात्रै आफूलाई आवश्यक पर्ने घर, जग्गा, गाडी खरिद वा बन्द ब्यापार गर्न सकिदैन । यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनै पर्छ ।
तर, सबै बैंकको ब्याजदर एउटै छैन । कुनै बैंकबाट त्यही कामको लागि ऋण लियो भने महंगो ब्याज पर्छ, कुनैबाट लिदा सस्तो पर्छ ।
त्यसो भए कुन बैंकबाट ऋण लिदा सस्तो ब्याजमा पैसा पाइन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको लागि तपाइले बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणमा आधार दर प्रकाशित गर्ने गरेका हुन्छन् । यो आधार दरले नै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिदा सस्तो वा महंगो ब्याज तिर्नु पर्छ भन्ने संकेत गरिसकेको हुन्छ ।
बैंकहरुले ऋण दिदा वित्तीय विवरणमा प्रकाशित गर्ने आधार दरभन्दा केही महंगो ब्याज लिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत ब्यवस्थामा नै आधार दरमा प्रिमिय जोडेर कर्जाको ब्याज लिन पाइने भनिएको छ । बैंकहरुले यस्तो प्रिमियम ०.५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म लिने गरका छन् ।
आधार दरमा कतिसम्म प्रिमिय जोडर कर्जाको ब्याजदर कायम गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टसँग नभनेको भएपनि अर्काे नीतिगत ब्यवस्थाले यसलाई नियमन गर्ने गरेको छ । त्यो भनेको निक्षेप र कर्जाको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनै नहुने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ ।
कुन बैंकको ऋण सस्तो पर्छ ?
बैंकहरुले गत पुस मसान्तसम्मको आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । उनीहरुले प्रकाशित गरेको आधार दरले नै कुन बैंकबाट ऋण लिदा सस्तो पर्ने र कुनको महंगो पर्ने भन्ने संकेत गर्छ ।
बैंकहरुले ऋण दिदा आधार दरमा प्रिमियम जोड्ने भएकोले सकेसम्म कम जोड्न बैंकलाई तपाइ आफैले आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा कम आधार दर राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट ऋण लिदा सबैभन्दा कम ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने नै हो । तर, उसले आधार दरमा बढी प्रिमियम जोड्यो र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंककोभन्दा आधार दर बढी भएको बैंकले आधार दरमा नगन्य प्रिमियम जोड्यो वा जोड्दै नजोडि दियो भने अर्काे बैंकबाट सस्तोमा कर्जा पाइदैन भन्ने पनि होइन ।
गत पुस मसान्तमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको आधार दर ५.६ प्रतिशत छ । नेपाल बैंकको ६.०६ प्रतिशत छ ।
नविल बैंकको आधार दर ७.९४ प्रतिशत छ । एभरेष्ट बैंकको ८.२२ प्रतिशत छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८.९६, हिमालयन बैंकको ९.११, एनआइसी एशिया बैंकको ९.३३, प्रभु बैंकको ९.३७ र सानिमा बैंकको ९.७५ प्रतिशत छ ।
बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणका अनुसार नेपाल एसबीआइ बैंकको ९.८२, ग्लोबल आइएमइ बैंकको १०.०९, एनएमबी बैंकको १०.११, प्राइम बैंकको १०.१७, लक्ष्मी बैंकको १०.३६, सिद्धार्थ बैंकको १०.५९ र बैंक अफ काठमाडौंको १०.६ प्रतिशत आधार दर छ ।
यस्तै सनराइज बैंकको १०.६३, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको १०.७९, नेपाल बंगलादेश बैंकको १०.८२, मेगा बैंकको १०.८३, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको १०.८७, माछापुच्छ्रे बैंकको १०.९९, जनता बैंकको ११.०४, कृषि विकास बैंकको ११.१५, सेन्चुरी बैंकको ११.५, र कुमारी बैंकको ११.५५ प्रतिशत आधार दर छ ।
Select Month May 2020 (60) April 2020 (134) March 2020 (63) February 2020 (68) January 2020 (69) December 2019 (55) November 2019 (47) October 2019 (27) September 2019 (35) August 2019 (35) July 2019 (16) June 2019 (22) May 2019 (17) April 2019 (43) March 2019 (7) February 2019 (8) January 2019 (42) December 2018 (29) November 2018 (12) October 2018 (2) September 2018 (20) August 2018 (12) July 2018 (11) June 2018 (25) May 2018 (18) April 2018 (5) March 2018 (35) February 2018 (18) January 2018 (16) December 2017 (30) November 2017 (14) October 2017 (16) September 2017 (18) August 2017 (19) July 2017 (7) June 2017 (10) May 2017 (9) April 2017 (24) March 2017 (18) February 2017 (7) January 2017 (42) December 2016 (64) November 2016 (30) October 2016 (22) September 2016 (35) August 2016 (38) July 2016 (36) June 2016 (72) May 2016 (27) April 2016 (49) March 2016 (49) February 2016 (47) January 2016 (70) December 2015 (46) November 2015 (27) October 2015 (23) September 2015 (46) August 2015 (46) July 2015 (52) June 2015 (85) May 2015 (74) April 2015 (95) March 2015 (61) February 2015 (77) January 2015 (62) December 2014 (85) November 2014 (101) October 2014 (67) September 2014 (132) August 2014 (148) July 2014 (126) June 2014 (63) May 2014 (77) April 2014 (76) March 2014 (50) February 2014 (41) January 2014 (73) December 2013 (101)
नवजीवन सहकारी संस्थाद्वारा कर्मचारी, सञ्चालकको कोरोना बिमा
बजेटमा सहकारी : नगदरहित कारोबारका लागि प्रोत्साहन
अर्थतन्त्र थप जटिलता तर्फ
सहकार्य साकोसद्वारा कर्मचारीको कोरोना बिमा